Sina sy ny mpivaro-drotra vita amin'ny Garam-bary any China ary mpamatsy | Hoyer
Fanamboarana masira sy mavokely maoderina - kanto sy manaitra ireto mpamosavy sira sy dipoavatra ireto dia misy savony mangarahara, vy vita amin'ny vy tsy voatanisa, ary bracket vy azo ampiasaina. Manampia zavatra matsiro amin'ny lakozia na ny latabatra fisakafoanana anao.
Haavo: 195mm / 7.7 santimetatra
savaivony: 65mm / 2.6 santimetatra
Ny famolavolana tsotsotra tsotra sy azo tsapain-tanana - ny fametahana mason-tsira avo lenta ary fametahana ny famafazana dia manasongadina ny fikosoham-bary seramika miaraka amin'ny mekanika fanitsiana haingana eo amin'ny tampony izay ahafahanao mihodina eo anelanelan'ny ultra-fine na coarse madiodio mba hamoahana tsara ny sira na ny felana any Himalaya.
Mametaka, tsy misy fikosoham-bary intsony - ity vy tsy mamelana ity sy ny fikosoham-bary tsy mora asiana sira hanamora ny sira, ny dipoavatra, na ny zava-manitra tsy misy fifangaroana. Mety amin'ny fampiasana azy ireo hanomanana sakafo, sakafo isan'andro na mahandro amin'ny barbecue.
Tsy misy bateria, tabataba be sy manahirana mifototra amin'ny fikosoham-bary, mateza kokoa noho ny milina manitra mahazatra.
Ny marika azo itokisana - manome ny paingotra sira sy dipoavatra izahay, mampiasa ny fitaovana avo lenta indrindra, matanjaka, lamaody ary mateza. Raha manana fanontaniana ianao aloha na aorian'ny fividianana dia azafady mba hifandraisa aminay ary hanome ny fanampian'ny mpanjifa tsy manan-tsahala izahay.
Ankafizo ny sira sy ny voanjo Himalaya vaovao amin'ny zava-manitra fitaratra mahafinaritra
Ny zava-manitrao ampio ny sakafonao dia afaka manandrana azy tanteraka, indrindra ny sira sy ny dipoavatra. Ampiasao ao an-dakozia, eo amin'ny latabatra, ianao rehefa mahandro amin'ny grill. Izany no antony ilainao fomba tsotra sy manaitra manampy ny fofona mety tsara fa tsy be pitsiny. Ny mpivarotra ny sira sy ny dipoavatra dia namboarina miaraka amin'ireo tavoahangy fitaratra mangarahara, ny tendron'ny vy stainless 304, ary ny fikosoham-bary vita amin'ny tanana, ka mahatonga azy ireo ho mahafinaritra sy azo ampiasaina, na manomana sakafo hariva ianao na manisy tsiro kely fotsiny amin'ny sakafo tianao .
Vato famaranana mavesatra
Mampiasa rafitra fikosoham-bary mahery vaika kokoa isika, izay azo tsatsoana, tsy mety hatanjaka ary mora zatra, manome traikefa mahafatifaty tonga lafatra.
Fanomezana fanomezana mahafinaritra ny mpanamboatra trano
Ity kalitao vy sy dipoavatra be kalitao avo lenta ity dia fanomezana an-dakozia lehibe ho an'ny tenanao sy ho an'ny hafa amin'ny fotoana manokana, hahatonga anao ho tia ny lakozia ary mankafy ny foto-mahandro.
Mora amin'ny fanadiovana sy hitazomana
Ny fikosoham-bolo dia mora atambatra sy tsy voatsindrona, noho izany dia mora handoa sy hanadio azy ireo ianao. Ity no hevitra tsara amin'ny fianakaviana sahirana.
Famandrihana tsy misy hafatra
Tsy toy ny fisehoana sasany na fikosoham-bary mangeja izay manimboka na mampisafotofoto ireo fa mizara sira na dipoavatra rehefa tsy ampiasainao ny miasa.
Fomba maranitra, ergonomika
Ny famolavolana haingam-pandeha ambony sy mora ampiasaina dia mora kokoa amin'ny fitazonana azy amin'ny tanana iray, amin'ny fikosoham-baravarana amin'ny tanana hafa, eny fa na dia ireo manana tanjaka ambany aza.
Size Haavony: 19.5 / 13.5 cmDiameter: 6,5 cm Haavony: 7,7 / 5.3 santimetatraDiameter: 2,6 santimetatra
MOQ 5000 pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
b. santionany namboarina:QTY: araky ny fitakianaoVidiny: arakaraka ny lamina manokana sy ny vokatra
Previous: 500ml Dark Brown Oil & Vinegar Cruet miaraka amin'ireo mpitrandraka sy Funnel
Manaraka: 4 oz Spice Glass Shaker miaraka amin'ny Labana Chalkboard ary Stainless Steel Lid
tavoahangy misy rano sira sy dipoavatra
tavoahangy misy dipoavatra sy dipoavatra
sotro misy tavoahangy masira sy dipoavatra
tavoahangy menaka vy
500ml Dark Brown Oil & Vinegar Cruet miaraka amin'ny ...
Sambo fitahirizana fitaratra mahitsy, Jar-bary amin'ny alàlan'ny sakafo miaraka amin'ny ...